Top 15 Corporate Finance Interview Questions ﻿
Top 15 Corporate Finance Interview Questions
ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းကြီးများ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလူတွေ့စစ်ဆေးမှု မေးခွန်း ၁၅ခု
လုပ်ငန်းကြီးများ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လူတွေ့စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်စဉ်တွင် မေးမြန်းလေ့ရှိသော ကွဲပြား ခြားနားသည့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုမေးခွန်းများတွင် ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာရှင်းတမ်းများကို မည်သို့နားလည် သဘောပေါက်ပါသလဲနှင့် ထိုအရာကသင့်အား ဘာတွေကိုပြောပြနေပါသလဲ? နောက်ဆုံးဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း များအရ ကုမ္ပဏီရဲ့ အဓိက အာရုံစိုက်ရမယ့် အခန်းကဏ္ဍများဟာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ? ရေတိုဘဏ္ဍာရေးရဲ့ အရင်းအမြစ်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြပါ၊ ကုမ္ပဏီဟာ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်နှိုင်းစာလျှင် လည်ပတ်ငွေအရင်း အနှီးချေးငွေများ ပိုမိုလိုအပ်လာနိုင်လား ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိအတိုင်းအတာကို ဖြတ်တောက်မှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သလား? ကုမ္ပဏီ၏ငွေသားစီးဆင်းမှုရှင်းတမ်းကို ရှင်းလင်းချက်ပြုလုပ်ပြီး အဓိက ကုန်ကျမှုဖြစ်ပေါ်နေ သောအကြောင်းအရာများဟာဘာတွေလဲ? အစရှိသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
၁။ ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများဆိုသည်မှာဘယ်လိုအရာလဲ နှင့် ထိုအရာများက ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အကြောင်းကို ဘယ်လိုပြောပြနေပါသလဲ?
၂။ ငွေသားစီးဆင်းမှုရှင်းတမ်းကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြပါ။
၃။ ကုမ္ပဏီမှအသုံးပြုနေသော ကာလတိုဘဏ္ဍာရေး ၃မျိုးအားရှင်းလင်းဖော်ပြပါ။
၄။ လည်ပတ်ငွေအရင်းအနှီးအား ရှင်းလင်းဖော်ပြပါ။
၅။ ကုမ္ပဏီမှ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရှင်းတမ်း ၃ခုအပေါ် ထိုကိစ္စ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကျွန်ုပ်အားရှင်းလင်းပြောဆိုပါ။
၆။ EPS ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းနှင့် ထိုအရာအားမည်သို့တွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်ပါသလဲ?
၇။ မတူကွဲပြားသော EPS အမျိုးအစားများကိုဖော်ပြပါ။
၈။ Futures Contract နှင့် Forwards Contract တို့အကြား ခြားနားချက်မှာ အဘယ် နည်း?
၉။ မတူကွဲပြားသော Bond အမျိုးအစားများမှာအဘယ်နည်း?
၁၀။ Deferred Tax Liability ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းနှင့် ထိုအရာအား အဘယ့်ကြောင့် ပြုလုပ်ခဲ့သနည်း?
၁၁။ လုပ်ငန်းကြီးများ၏ ဘဏ္ဍာရေးတွင် Financial Modeling ဆိုသည်မှာအဘယ် နည်း?
၁၂။ Valuation တွင်အသုံးအများဆုံးသော multiples တွေဟာ ဘာတွေလဲ?
၁၃။ Stock Option များမှာအဘယ်နည်း?
၁၄။ Stock Split နှင့် Stock Dividend ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း?
၁၅။ DCF method ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း?